देवघाट क्षेत्र विकासमा टंकनाथनाथ आएपछि स्थानीय खुशि (हेर्नुहोस् ? यि ७ तस्वीर पनि ) – Saurahaonline.com
देवघाट क्षेत्र विकासमा टंकनाथनाथ आएपछि स्थानीय खुशि (हेर्नुहोस् ? यि ७ तस्वीर पनि )
देवघाट, ११ असोज । देवघाट क्षेत्र विकासमा क्रियाशिल टंकनाथ पौडेल देवघाट क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि स्थानीय खुशि भएका छन् । मंगलबार आयोजित स्वागत तथा पदस्थापन कार्यक्रममा स्थानीय नेताहरुले देवघाटको विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । “देवघाटको वस्तुस्थिति बुझेका व्यक्ति अध्यक्ष बन्नु ज्यादै सकारात्मक कुरा हो”, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता भुवन गुरुङले भने,“देवघाट विकास अब समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्ने छ ।”
एमालेका स्थानीय नेता शिवराज पौडेलले स्थानीय विकार हटाउदै देवघाटको विकास हुने विश्वास गरे । “देवघाट पवित्र शहर बनाउने अभियान पुरा होस”, उनले भने,“हामी सक्दो सहयोग र सुझाव दिन तयार छौं ।” कांग्रेसका स्थानीय नेता बाबुराम पौडेलले देवघाट बुझेको व्यक्ति अध्यक्ष बनेकाले धेरै योजनाहरु पुरा हुने बताए ।
“आवश्यकता पहिचान गर्न पनि सहज हुनेछ”, उनले भने,“देवघाटको महिमा अझै उचाईमा पुग्ने अपेक्षा लिएका छौं ।” देवघाट क्षेत्र विकास समितिका निर्वतमान अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार पियाले पूर्णकालिन कर्मचारी राखेर काम अघि बढाएमा विकासले गति पाउने बताए ।
देवघाट विकासमा बजेट अभाव मुख्य समस्या हुने गरेको बताए ।सा्े कायर््क्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी स्वामी अनन्त श्री विभुषित स्वामी आत्मान्नद गिरी जी महाराजले देवघाट धार्मिक र पर्यटक क्षेत्र भएकाले यस विकासमा सबै एकजुट भइलाग्नु पर्ने बताउनु भयो । यस्तै देवघाट धार्मिक क्षेत्र भएकाले यसलाई पुर्ण परुमा साहाकारी क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
स्थानियबासीन्दा र विभिन्न राजनित दलका प्रतिनिधीहरुसंग सहकार्य गदै अगि बड्ने देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष टंकनाथ पौडेलले बताउनु भएको छ ।